မွေးကင်းစကလေးရဲ့ ဦးထိပ်က ဦးရေပြားဟာ ဘာကြောင့် ပျော့စိစိဖြစ်နေသလဲ? – BurmeseHearts
မွေးကင်းစကလေး၏ ဦးရေပြားသည် ဦးထိပ်တွင် ပျော့စိစိဖြစ်နေတာကို ဖွဖွထိကိုင်ရုံနှင့် သိနိုင်သည်။ လှုပ်တုတ်တုတ် ဖြစ်နေတာကိုလည်း ဆံပင်ပါးတဲ့ ကလေးတွေမှာ တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ထိုနေရာအား ကိုင်လိုက်လျှင် ခပ်နွေးနွေးခံစားရသည်။မွေးကင်းစကလေးတိုင်းဟာ ဦးရေမဆက်သေးတဲ့အတွက် ထိုသို့ မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်သည်။ ဦးရေဆက်ဖို့ (၉)လမှ (၁၈)လအထိ ကြာနိုင်သည်။ ကလေးတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဦးရေဆက်သည့်ကာလ မတူနိုင်ပေ။ ထို့ကြောင့် ကလေးဦးထိပ်ကို ဂရုတစိုက် သတိထားသင့်သည်။
ကလေးကိုယ်ပေါ်က ဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲမှုအထွေထွေကို စစ်ဆေးဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်က ဘယ်အချိန်လဲ?
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ (၄)ပတ်မှ (၇)ပတ်အတွင်း
BurmeseHearts	 Jun 25, 2015 0
ဇနီးကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ဆန္ဒမပြည့်သဖြင့် ဖောက်ပြန်သော ခင်ပွန်းများ…
ကလေးမီးဖွားပြီးစမိခင်တွေ ဘာကြောင့် ဝမ်းချုပ်တတ်သလဲ?
အလွယ်စားသောက်ကုန်တွေကို ဘာကြောင့် ရှောင်စားသင့်သလဲ?
ကလေးငယ်များကို စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုကင်းစွာ ပျော်ရွှင်စေလိုလျှင်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းများရဲ့ မိန်းမကိုယ်မှ အဖြူဆင်းခြင်းကို …
ဥကို အစိမ်းသောက်လျှင် ပိုအားရှိသလား?
ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ်(၄)ပတ်နဲ့ (၇)ပတ်အတွင်းမှာ ဘာတွေ ဖြစ်တတ်သလဲ?
ဓမ္မတာ သွေးဆုံးတယ်ဆိုတာ စိတ်ဓါတ်ကျစရာမဟုတ်ပါ